अमेरिका र EU - रूस विरुद्ध युनाइटेड? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
श्री बोररेल मस्कोबाट फर्किएपछि उनलाई पर्याप्त काम नगरेको र भ्रमणको क्रममा कडा नहुनु भएकोमा आलोचना गरिएको थियो।
यो स्पष्ट छ कि रसियाले युरोपियन युनियनबाट अलग गरिरहेको छ।
ईयू रूससँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा साझा रणनीति अपनाउन विश्वास गर्दछ।
जोसेप बोररेल एक स्पेनिश राजनीतिज्ञ हुन्, १ डिसेम्बर २०१ 1 देखि वर्तमान यूरोपीयन संघको उच्च प्रतिनिधि। उनले २०१ Foreign देखि २०१ Spain सम्म स्पेन सरकारको विदेश मन्त्री, यूरोपीयन संघ र सहयोग मन्त्रीको रूपमा काम गरे।
श्री नवलनीलाई २.2.7 बर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ, र उनी विरुद्ध थप आरोप लगाउने सम्भावना छ। श्री बोररेलले नौलानी कारागारको विषय उठाए। रसियाले श्री नवलनीसँगको मुद्दा आन्तरिक मुद्दा हो भन्ने विश्वास गर्दछ।
श्री बोररेल मस्कोबाट फर्केपछि, पर्याप्त काम नगरेकोमा उनको आलोचना गरिएको थियो र आफ्नो यात्रा को लागी पर्याप्त कडा छैन। इयुले विश्वास गर्दछ कि श्री नवलनीलाई तुरुन्त रिहा गरिनु पर्छ।
यसबाहेक, सम्मेलनमा, श्री बोररेलले भने कि रसियाको भ्रमणले श्री नवलनीको बिरूद्ध मुद्दा, र प्रदर्शनकारीहरुमा भएको क्रान्तिको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै रसियासँगको सम्बन्धमा सकारात्मक एजेन्डाको सम्भावना पनि पत्ता लगाउन आवश्यक थियो। ।
श्री बोररेलको विश्वास छ कि एक आक्रामक प्रतिक्रियाले उनीहरु प्रजातान्त्रिक मूल्यहरु लाई आफ्नो अस्तित्वको लागि खतराको रूपमा देखाउँछन्। नवलनीको केसले क्रेमलिनलाई पश्चिमी दृष्टिकोणमा अवरुद्ध गरेर प्रतिक्रिया देखायो।
यो कथन त्रुटिपूर्ण छ, विशेष गरी स्पेनमा हालसालै के भइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई र फ्रान्समा प्रदर्शनको क्रममा शक्तिको प्रयोगलाई ध्यान दिएर।
यसबाहेक, यो स्पष्ट छ जस्तो लाग्छ कि रूसले युरोपियन युनियनबाट अलग गरिरहेको छ। राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिनको शासनले आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित गर्न र विपक्षीसँग लड्नको लागि ठूलो मात्रामा विस्फोटन सहित कुनै पनि आवश्यक साधनहरू प्रयोग गर्दछ। यो यात्राको क्रममा स्पष्ट भयो।
श्री बोररेलले रुस भ्रमणको आफ्नो अनुभवले क्रिमलिन युरोपियन युनियनसँग अन्तर्क्रिया गर्न चाहँदैन भनेर देखाएको छ। रसियाका लागि ईयूले उदारवादी मूल्य र लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वस्तुलाई अस्तित्वगत खतराको रूपमा लिइन्छ, जुन उनीहरूले स्वीकार्न सक्दैनन्।
उही समयमा, उत्तरार्द्ध सत्य हो। यद्यपि प्रतिबन्धपछि रूसले ईयूसँग अन्तरक्रिया गर्न कस्तो चासो राख्छ?
रूसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्ने अनुरोधलाई प्रतिक्रिया दिन यसलाई अनुपयुक्त ठान्दछ। यदि तपाईं तिनीहरू समक्ष आउनुभयो र उनीहरूलाई मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली सम्मेलन अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सोध्नुहोस् भने उनीहरूले अन्तरक्रिया गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई रोक्छन्, श्री बोररेलले भने,
उही समयमा, नयाँ रूसी संवैधानिक संशोधनहरु, गत वर्ष पारित, रूस सहयोग गर्न बाध्य छैन। अन्तमा, श्री नवलनीले आफूलाई रसिया फर्कने छनौट गरे।
ईयू रूससँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा साझा रणनीति अपनाउन विश्वास गर्दछ। हामीलाई ईयूका सदस्यहरूको रूपमा एकता र दृढ संकल्प चाहिन्छ।
श्री बोररेल सोच्दछन् कि रूसले एक द्वन्द्वको पाठ्यक्रम अपनाएको छ, र यो द्वन्द्वको क्रममा हामीले तीनवटा कुरा गर्नु आवश्यक छ:
यो अन्तर्राष्ट्रिय वा मानवीय कानून उल्ल vio्घन छ जब रूस विरुद्ध पछाडि लड्नुहोस्।
रूस समावेश गर्दछ जब यसले हामीमा दबाव र साइन्स हमला सहित दबाव बढाउँदछ।
जे भए पनि, केहि क्षेत्रमा सहयोग गर्नुहोस्, जहाँ यो हाम्रो हितमा छ।
तसर्थ, संयुक्त राज्य र यूरोपीय संघले विश्वव्यापी मानवअधिकार प्रतिबन्ध शासनको एकीकृत छाता अन्तर्गत उच्च पदस्थ रूसी अधिकारीहरू विरुद्धको प्रतिबन्धको सूची विस्तार गर्न सहमत भए।
समग्रमा, यो स्पष्ट छ कि पश्चिमले रुसी परिवर्तनको आशाका साथ रूसी विपक्षलाई समर्थन गर्ने छ। पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनलाई सोभियत संघलाई ध्वस्त पार्न मद्दत गरिएको थियो। हाल, त्यहाँ कुनै उम्मेद्वारहरू छैनन् जुन रूसको बिरूद्ध समान प्राप्त गर्न सक्दछ।
अलेक्सी नेवलनी सांप्रदायिक समाचार EU Josep Borrell रूस us